Etu esi ejikwa njikwa Pee anwụrụ ọkụ gbazee ịgbado ọkụ? | Lechuang
Etu esi ejikwa njikwa Pee anwụrụ ọkụ gbazee ịgbado ọkụ?
N'ime usoro ịgbado ọkụ nke ọkpọkọ PE, ọ dị mkpa ijikwa njikwa ya nke ọma, rụọ ọrụ nchịkwa maka ndị na-arụ ọrụ, akụrụngwa, ihe ịgbado ọkụ na usoro ịgbado ọkụ, dabere na ọrụ nnwale, ma gbalịsie ike belata mgbawa mgbawa na mgbawa. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ na -ewu ihe na China anọwo na -agbaze agbaze
Malite itinye teknụzụ nnwale ultrasonic iji rụọ ọrụ nnwale dị mkpa, nke nwere ike ịchọta nsogbu ịdị mma ịgbado ọkụ n'ime pipụ PE, mee usoro dị irè iji mee njikwa mma tupu na n'oge ịgbado ọkụ, ma chịkwaa ogo ụlọ site na nyocha mgbe ịgbado ọkụ.
1) Usoro njikwa ịdị mma tupu ịgbado ọkụ.
Tupu ịgbado ọkụ, ọ dị mkpa ịrụ ezigbo ọrụ na njikwa mma, nke nwere ike melite ogo ọrụ. Nke mbu, maka ndị na -arụ ọrụ ịgbado ọkụ, ọ dị mkpa ka a kpachapụ anya nke ọma na nka ha, a ga -achọkwa ka ha nweta asambodo ntozu oke. N'otu oge ahụ, ọ dị mkpa ịhazi atụmatụ nhazi njikwa mma zuru oke wee wuo ụlọ ọrụ nwere ogo dị ka mkpa mmepe ya siri dị.
Quality talent otu, ka mma na -ewu àgwà. Maka ịgbado ọkụ, a ga -ezute mkpa mba dị mkpa. Nke abuo, na usoro ịhọrọ akụrụngwa ịgbado ọkụ, ọ dị mkpa itinye ọkụ na-arụ ọrụ igwe eletriki zuru oke iji mee ka ọ nwee ọrụ nke nkwụghachi ụgwọ akpaka, kpo oku akpaka na nrụnye, ngosipụta akpaka nke ozi ịgbado ọkụ, nyocha akpaka na nnwere onwe. nlekota
Nchọpụta akpaaka, mkpu mkpu na ọrụ ndị ọzọ iji kwado mmepe ọrụ ịgbado ọkụ. Nke atọ, ọ dị mkpa na sayensị họrọ usoro ịgbado ọkụ ma tụọ ya. N'otu oge ahụ, ọ dị mkpa ijide n'aka na ịdị mma gbazere na -ezute ụkpụrụ dị mkpa na enweghị nsogbu ogo ọ bụla. N'ikpeazụ, maka usoro ịgbado ọkụ, ọ dị mkpa ịrụ ezigbo ọrụ nke nyocha wee chịkwaa oke okpomọkụ ha
Okpomọkụ nkwadebe dị n'ime 230 ℃, iji meziwanye ogo ọrụ ya. N'otu oge ahụ, a ga -enyocha nke ọma paịpụ na akwa akwa. Mgbe ịdị mma ahụ mezuru ihe ndị dị mkpa, a ga -akwadebe njikọ ịgbado ọkụ, a ga -eme ọgwụgwọ nhicha, a ga -ehichapụkwa oyi akwa oxide.
2) Usoro njikwa mma n'oge ịgbado ọkụ.
N'ime ọrụ ịgbado ọkụ n'ezie, ọ dị mkpa ịrụ ezigbo ọrụ na njikwa mma, belata mmekpa ahụ ma jiri nwayọ kwalite sistemụ ọrụ ya. Nke mbụ, ekwesịrị ịchịkwa okpomọkụ nke igwe ịgbado ọkụ n'ihe dị ka 210 ℃ iji kwado ịgbado ọkụ. Na mgbakwunye, na ikuku ikuku ma ọ bụ mmiri ozuzo na snow, ọ naghị akwado ọrụ ịgbado ọkụ ma zere oke okpomọkụ
Obere ihe. Nke abụọ, ndị na -ahụ maka iwu ihe owuwu kwesịrị ịrụ ọrụ siri ike yana ụkpụrụ dị mkpa iji hụ na izi ezi nke ozi data ọrụ. Nke atọ, a ga -ejikwa mmachi nke ihe ndozi ahụ karịa 21mm, yana sayensị ka a ga -ejikwa ọsọ na ọnọdụ okpomọkụ wee zere ntụpọ ịgbado ọkụ. Nke anọ, ekwesịrị ịkagbu nkwonkwo nkwonkwo n'okpuru nrụgide siri ike (ikuku jụrụ oyi). Enweghị ike ịkwaga ya ma ọ bụ tinye mgbali. Nke ise, n'oge ịgbado ọkụ, ọ dị mkpa iji hụ na elu nke efere kpo oku na -adị ọcha mgbe niile.
3) Usoro njikwa mma mgbe ịgbado ọkụ.
Mgbe ịmechara ọrụ ịgbado ọkụ, ụlọ ọrụ na -ewu ihe ga -eme nyocha niile na ọdịdị nke akụkụ ịgbado ọkụ, ma jiri usoro nyocha ịcha (nlele nlele nlele ahụ ruru 5%) iji chọta nsogbu dị na ọrụ ịgbado ọkụ n'oge. . N'otu oge ahụ, ndị ọrụ nka kwesịrị ime nnwale nrụgide wee jikọta nyocha na -enweghị usoro na nyocha zuru oke, dị ka ike ọdụdọ.
Na nha na nyocha na -enweghị usoro, ozugbo achọpụtara nsogbu dị mma, a ga -eji nyocha zuru oke iji chọpụta ma enwere nsogbu n'akụkụ akụkụ ịgbado ọkụ niile.